Umqhubi wokuqala we-US Open Golf
Ukusuka kwi-US Open FAQ
I- US Open yokuqala yadlala kwi-Newport Golf ne-Club Club yase-Newport e-9 e-Newport, eRI, ngo-1895. I-1895 US Open yowokuqala. Kwenzeke kwiNewport Country Club eRhode Island, kunye nemigodi emine yesithoba nganye, izibonda ezingama-36. Zonke izimbobo ezingama-36 zachaswa ngolunye usuku, ngo-Oktobha 4, 1895.
Kwaye uHorace Rawlins wayengumdlali wokuqala we-US Open.
Abadlali abalishumi elinesine (kuquka abadlali abane) bangena, kwaye aba-10 babo bagqiba umdlalo.
Ukongeza kwi-golfers ezi-10 ezibhalwe ngezantsi, kwakukho noWilliam Norton, owaye wahamba emva kweemigodi ezi-18; kunye noCharles B. Macdonald, uWinthrop uRutherford noLawrence Stoddart, elowo owamshiya ngaphambi kokuba umdlalo uqale.
I-US Open idlalwe ngolunye usuku emva kokugqitywa kwe- Amateur yasekuqaleni yase-US (iphumelele yi-Macdonald), echasene kwikhosi elifanayo. (I-Open and Amateur yayidlalwe kwiklasi efanayo nganye kwiminyaka emithathu yokuqala yobukho babo.) I-Amateur yiyona mqhudelwano eyona nto inomdla kakhulu; I-Open yokuqala ichazwe njengento ethi "emva kwalokho" yi-USGA, eyona yenziwa kuphela ukususela ngoDisemba ka-1894.
AmaRawlins atyathwa yimivumba emibili phezu kukaWillie Dunn kunye nabathathu ngoJames Foulis kunye no-Andrew Smith. Ukuphumelela, amaRawlins athola imali yegolide kunye ne-150; Isonke semali esinikwe kunyaka we-1 yayiyi-$ 335.
I-Rawlins yayingumgijimali kunyaka olandelayo (ukuya kuFoulis), kwaye idlala ngo-15 US Ivula i-total, yokugqibela ngo-1912.
URawlins wayengumNgesi ngokuzalwa, uqeqesho lwegalufu ngokuthengisa. Ngaloo mihla eyayithetha ukusebenza kwiklabhu - kwakungabikho uhambo lwegalufa lokudlala, nangona abadlali begolfu babehlala badlala imingeni yemingeni kunye nemibukiso, kunye nomdlalo wexesha lomdlalo.
I-1895 US Open yayisisityezelo sesithathu samaRawlins awake wadlala kuyo, kodwa wayenenzuzo enkulu kuninzi kwabanye abasemasimini: ulwazi lwendawo.
URawlins wayengumncedisi weprogram kwikhosi yomkhosi, iNewport Country Club. (UWilliam Davis, owathi wagqiba isihlanu, wayeyintloko yekhlabhu kunye nomqambi weembobo ezithandathu zokuqala kulo mdlalo.)
Ukuzonwabisa kwimbali yomlando: I-US Amateur kunye ne-US Open tournaments e-Newport kwakufuneka ukuba idlalwe ngoSeptemba. Kodwa bahlehliswa inyanga ngenyanga xa i-Newport ibambe iNgqungquthela yeMelika yeMidlalo ngoMgqibelo.
Ngo-1995 - iminyaka eyi-100 ye-Amateur yokuqala kunye neVulekile kwi-Newport CC-iklabhu iphinde ibambe i-US Amateur, kunye neTiger Woods oyinqobileyo. U-Annika Sorenstam wanqoba i- US Women's Open Open ngo-2006.
1895 I-US Open Open Tournament Scores
Iziphumo ezivela kwi-1895 US Open golf edlalwa kwiNewport Country Club eNewport, eRode Island (i-amateur):
IHorace Rawlins 45-46-41-41--173 $ 150
UJames Foulis 46-43-44-43--176 $ 50
u-Andrew Smith 47-43-44-42--176
UWilliam Davis 45-49-42-42--178 $ 25
USamuel Tucker 49-48-45-43--185
Buyela e- US Vula i- index ye- FAQ
I-WGC Dell Match Play Championship
Ngo-2010 iBritish ivulekile: i-Oosthuizen ibalekela nayo
Imvula yamandulo yamaGrike eyintetho ye-Deucalion ne-Pyrrha
Umvuzo we-Biologist Marine
Inyanga e-Gemini - Uphawu lwakho lweGemini Moon
Imizobo yeDedimentary Rock
Iingcaphulo zeNkcazo kunye neNgcono
Xa uMkhosi weMongameli uqala
Ama-25 ama-Funniest Musicals ahlala apha
I-Admissions yeSixeko sase-Elizabeth City State
Oko Kufuneka Ukwazi NgeNdlela Yokuhamba Kwebhayisikili Ehamba Ngendlela
Ukukhetha iCue Pool
Iincwadi ezigqwesileyo ukunikela njengeziphoso zeKrisimesi